Oraahda Paul Krugman: 80-ka weedhood ee ugu fiican, waa kuma kan iyo maxay tahay aragtidiisa | Dhaqaalaha
Paul Krugman Xigasho
Casudi casals | 21/07/2021 17:45 | Dhaqaalaha guud
Marka ay timaado barashada iyo abuurista fikradaha, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad ogaatid fikradaha iyo aragtiyaha kaladuwan. Gaar ahaan adduunyada maaliyadeed waxaa lagugula talinayaa inaad wax yar ka ogaato dhaqaalayahanada ugu caansan, fikradahooda, aragtiyaha iyo qaababka ay u dhaqmaan. Sidaa darteed, weedhaha Paul Krugman, oo isagu ku guuleystay Nobel Prize ee dhaqaalaha, wuxuu noqon karaa mid aad noo anfaca.
Dhaqaalayahan weyn wuxuu dhaliilayaa qodobo kala duwan oo bulsho iyo siyaasadeed oo faragalin ku leh dhaqaalaha sida aan maanta ku naqaano. Waxaan kugula talinayaa inaad akhriso weedhaha ugu caansan ee Paul Krugman. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ka hadli doonaa aragtida ganacsiga ee uu isagu soo saaray iyo taasi waxay u maleynaysay kacaan dhan.
1 80ka weedhood ee ugu wanaagsan Paul Krugman
2 Waa kuma Paul Robin Krugman?
3 Waa maxay aragtida Paul Krugman?
80ka weedhood ee ugu wanaagsan Paul Krugman
Weedhaha Paul Krugman ayaa si gaar ah u muuqda dhaleeceynteeda adag ee ku saabsan la'aanta hufnaanta dhaqanka iyo faa'iidooyinka ay ku raaxeystaan ​​kaliya dadka hodanka ah, sida helitaanka jaamacadaha ama cashuuraha oo hooseeya. Aynu hoos ku aragno 80-ka weedhood ee ugu xusuusta badan:
"Ma mudna in dib-u-habeyn la helo haddii lagu helo iyada oo la sameeyo tanaasulaad aad u tiro badan oo ay ku dhammaato in lagu cambaareeyo guuldarrada."
Codsiga loo dirayo dadka aan caqliga lahayn ayaa sidoo kale ka muhiimsan sida ay umuuqato. Sababtoo ah dhaqaaluhu wuxuu saameeyaa inta badan nolosha, qof walba wuxuu doonayaa inuu ra’yi dhiibto.
"Inta badan dadka, hannaanka hagaajinta dhaqaalaha ma ahayn inuu noqdo mid xanuun badan ama ku lug leh allabaryo."
"Zombie-ga aan ugu jeclahay waa aaminsanaanta in hoos u dhigista canshuuraha ee dadka taajiriinta ah ay ka dhigeyso dhaqaalaha mid kobcaya isla markaana abuuraya hanti ku dambaysa inuu ku fido dadka oo dhan."
«Waxa runti aad tahay inaad raadiso, adduun had iyo jeer nagu wajahda lama filaan aan fiicnayn, waa caqli ahaaneed xagga caqliga: u diyaar ahaanshaha la kulanka xaqiiqooyinka, xitaa marka ay diidaan fikradahaaga, iyo awoodda aad ku qirato qaladaadka iyo inaad beddesho dariiqa.»
Joojinta niyadjabkaan waxay noqon laheyd waayo aragnimo ka dhigeysa in qof walba dareemo wanaag, marka laga reebo kuwa kaliya ee siyaasad ahaan, bulsho ahaan iyo xirfad ahaanba ku dhex milmay caqiidooyinka madaxa adag.
Dad badan ayaa leh, tusaale ahaan, shuruudaha gelitaanka, xitaa jaamacadaha caanka ah, si aad ah ayaa hoos loogu dhigay. "
“Marka ballaarinta lacagta aysan waxtar lahayn, ballaarinta maaliyadeed, sida barnaamijyada howlaha guud ee amaahda lagu maalgeliyo, waa inay meeshooda galaan. Kordhinta maaliyadeed ee noocan oo kale ah waxay jebin kartaa meertada xun ee kharashka yar iyo dakhliga hoose. "
Laakiin xusuusnow in tani sinnaba u ahayn talo soo jeedin guud oo siyaasadeed; asal ahaan waa istiraatiijiyad quus ah, daroogo khatar ah oo loo qoro oo keliya markii ay fashilanto dawada lacagta lagu iibsado ee miiska laga iibsado. - Gargaarka bulshada.
Mudadan dheer waa hage khaldan oo lagu fahmayo waxa jira. Muddada dheer dhammaantayo waan wada dhiman doonnaa.
"In canshuurta laga dhimo taajiriinta ma abuureyso taajirnimo, waxay kaliya u adeegaysaa in taajirku ka taajiro."
Yuu khaladkeedu yahay beddelka dooda halista ah ee ganacsiga adduunka iyo tan aan u arkay inay tahay caalamiga pop? »
Maxay Yurub si xun uga jawaabtay dhibaatadeeda? Waxaan horeyba u xusay qayb ka mid ah jawaabta: hogaamiyeyaal badan oo qaarada ka tirsan ayaa umuuqda inay ka go'an tahay inay sheekada geelasiiyaan waxayna aaminsan yihiin in kuwa dhibaatooyinka soo maraya - oo aan ahayn Griiga oo kaliya - ay halkaas u gaareen masuuliyad daro dhanka maaliyadeed ah. "
"Waxaa loo maleynayaa in seddex meelood meel dadka soo gala Jaamacadda Harvard aan la aqbali lahayn labaatan sano ka hor."
"Ilaa iyo xad, dabcan, waa natiijada dareenka asaasiga ah ee aadanaha: caajisnimada caqliga, xitaa kuwa ka dhex muuqda kuwa loo arki doono inay yihiin kuwa caqli iyo qoto dheer, waxay had iyo jeer noqon doonaan xoog awood leh."
"Haddii aad nafsaddaada u hurto siyaasadda aagagga ugu dhow Xisbiga Jamhuuriga, waa inaad difaacdaa fikradahan, xitaa haddii aad ogtahay inay been yihiin."
"Dhaqaaleyahannadu waa hawl aad u fudud oo aan waxtar lahayn haddii, xilliyada duufaanka, waxa kaliya ee ay noo sheegi karaan ay tahay in markii duufaantu dhaafto ay biyuhu dib u qaboobi doonaan."
"Haddii dhibaatadu ay ahayd qashin maaliyadeed, toosnaanta maaliyadeed waa inay noqotaa xalka."
Doorka tifaftireyaasha, oo inta badan doorbida waxa ay leeyihiin kuwa caalamiga ah ee pop-ka ah inay yiraahdaan, waa inaan la iska indhatirin fikradaha adag ee dadka akhrin kara xisaabaadka qaranka ama fahmi kara in isku dheelitirka ganacsigu sidoo kale uu yahay farqiga u dhexeeya keydinta iyo maalgashiga.
"Anigu ma ihi wali laakiin waxaan diyaar u ahay inaan bixiyo canshuur badan."
Bilowgii xiisadda dhaqaale, dadka sida khaldan u hadla waxay yiraahdeen xiriirka aan la leenahay Shiinaha wuxuu isu beddelay mid cadaalad ah oo dheellitiran, ka dib dhan: waxay naga iibinayeen alaabada lagu ciyaaro ee sumeysan iyo kalluunka sumeysan, annaguna waxaan ka iibinaynay damaanado khiyaano ah.
"Marka la soo koobo, guusha dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, aragti ahaan iyo ficil ahaanba, waxay suurta gelisay in suuqyada xorta ah ee dhaqaalahooda ay sii noolaadaan."
"Kuwa hodanka ah waxay ku bixiyaan lacag aad u badan sidii dadka looga dhaadhicin lahaa in hoos u dhigista canshuuraha ay u wanaagsan tahay dadka oo dhan:"
«Qiyaasta Maraykanka Iyagu waa isla caamilayaashii caalamiga ahaa; Waxay si ula kac ah ugu adeegsadaan joornaaladooda barmaamijyo u dhigma dagaal ka dhan ah caqliga. "
"Dhaqaalaha waxaa loo soo bandhigay shaqo anshax leh, laakiin weji kale ayaa loo rogay: runtiina, dembiyada qofka laga xumaado weligood ma dhicin."
"Haddii aan ogaanno in shisheeyaha cirka ka yimid ay qorsheynayaan inay na soo weeraraan waana inaan abaabulnaa howlo ballaaran si aan isaga difaacno halistaas si sicir-bararka iyo miisaaniyaddu ay u qaataan dhabarka dambe, dhibaatadan waxay ku dhammaan lahayd 18-ka bilood.
Xaaladaha siyaasadeed waxay saameyn lama huraan ah ku leeyihiin qeybsiga dakhliga.
"Waxaan u maleynayaa in ilaa iyo inta shidaalka shidaalka ay jaban yihiin, dadku ay isticmaali doonaan isla markaana ay u dhaqaaqaan u guuritaanka teknoolojiyada cusub."
“Waxaan sameynay wax aad u yar si aan u xallino dhibaatooyinka sababay dib-u-dhaca dhaqaale. Casharkeena maanaan baran.
Waxaan ku jirnaa xaalad halka kuwa ugu liita ay u muuqdaan inay guuleysanayaan.
Maxay shaqada u khuseysa siyaasada ugu muuqataa inaysan ka hor imaaneyn cilmi baaristeyda? dhabta ah? Waxaan u maleynayaa inay tahay sababtoo ah waxaan awoodey inaan wajaho dhibaatooyinka siyaasadeed anigoo adeegsanaya ku dhowaad isla qaabkii aan ku isticmaalay shaqadayda aasaasiga ah. "
"Haddii aadan guuleysan markii ugu horeysay, isku day markale iyo markale."
"Shaqaaluhu aad ayey uga cagajiidayaan inay aqbalaan, waxay dhahaan, dhamaadka bisha qadar 5% ka yar wixii ay heleen ayaa lagu shubaa koontadooda, halkii laga aqbali lahaa dakhli aan la bedelin oo awooddiisa wax iibsi, si kastaba ha ahaatee, ay u aragto inay hoos u dhacday sicir bararka. "
"Waan qirayaa: Waxaan ku baashaalay daawashada garabka midig oo duurjoogta ah iyadoo dib u habaynta daryeelka caafimaad ay aakhirkii noqotay sharci."
Maqnaanshaha caymiska bulshada ayaa ka dhigan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sinnaan la'aanta iyo luminta dhaqdhaqaaqa bulshada. "
Ujeeddadu maaha in la ciqaabo dadka taajiriinta ah, kaliya waa in laga dhigo inay bixiyaan qaybtooda maalgelinta siyaasadaha guud ee dadweynaha intiisa kale u baahan yihiin.
"Haddii uu jiro burbur berri, qalabka dib loogu howlgelinayo dhaqaalaha wuu daciifayaa."
“Mareykanku wuxuu sii ahaanayaa meel mudnaan u leh dadka ugu qanisan 5 boqolkiiba… Waa bulsho furfuran. Si wanaagsan ayaan ula dhaqannaa shaqsiyadeena sare. "
In kasta oo xoogagga caalamku ay si isku mid ah u saameynayaan dhammaan waddamada horumaray, haddana sida dakhliga loo qaybiyo way ku kala duwan yihiin waddan ka waddan.
"Sida muuqata qayb muhiim ah oo ka mid ah muwaadiniinta ayaa rumaysan run ka saraysa oo siyaasad ama diin ah waxayna u malaynayaan in aysan macno samaynayn in been la sheego haddii aad u adeegto runtaas sare."
"Waxaan u maleynayaa in la dhigo caymiska guud ee caafimaadka, oo ah wax la qaban karo, inay tahay mid mudnaan leh oo matali doonta talaabo weyn oo horay loo qaaday."
"Haddii dadku doqon siyaasadeed yihiin waa sababta oo ah waxaa jira dad aad u danaynaya inay sidan ku sii hayaan."
"Ma jiraan wax caddayn cilmi ah oo sheegaya in kor u qaadista mushaharka ugu yar, illaa xad cayiman, ay sababi karto shaqo la'aan badan."
«Dhacdo ayaa ku jirta Aagga Twilight Zone taas oo saynisyahano been abuur ah duulaan shisheeye si loo gaaro nabada adduunka. Hagaag, markan uma baahnin, waxa aan ugu baahanahay waa inaan helno xoogaa dhaqaale ah. "
Waxsoosaarka wax walba maahan, laakiin mustaqbalka fog wax walba waa ku dhow yihiin.
«Isbeddel ku-meel-gaadh ah oo jahli ah, muddo ah ku adkaysiga aan eegno jihooyinka qaarkood waxay naga dhigeysaa mid aan awood u lahayn inaan aragno waxa saxan sankeenna hoostiisa, waxay noqon kartaa qiimaha horumarka, qayb lama huraan ah ee waxa dhaca markaan isku dayeyno inaan macno samayno kakanaanta, adduunka. "
Xaqiiqdu waligeed kuma noolaan wixii riyadii Mareykanku rajaysay.
“Waxaa jira musuqmaasuq badan; waxaa jira siyaasiyiin iyagu ogolaaday in la iibsado, ama ha noqdaan kuwa wax ku darsaday ololahooda ama laaluush shaqsiyadeed. "
"Markii lagaa codsado inaad mushahar dhimis sameyso, aad ayey u adag tahay in la ogaado in madaxaagu uu kaa faa'iideysanayo."
“Xaqiiqdu waxay tahay in tusaale kasta oo guul leh oo horumar dhaqaale ah qarnigii la soo dhaafay, kiis kasta oo ummad sabool ah oo gaadhay heer aad u yar ama ka yar oo nolol wanaagsan, ama ugu yaraan ka wanaagsan, waxaa lagu gaadhay caalamiyeynta, taas oo ah in la yiraahdo, wax soo saar suuqa adduunka, halkii aad isku dayi lahayd isku filnaansho. "
"Waxaan leeyahay saaxiibo, saynisyahano siyaasadeed, cilmiga bulshada, oo wadaaga xiisaha ugu yaraan noocyada khayaaliga ah ee sayniska."
"Daacad kama noqonaynno dadka haddii aan fikrad ka dhiibano in canshuur dhimistu ay bixiso oo ay iyagu iska bixiyaan."
Awoodda waddan ee uu ku hagaajinayo heerka nololeed ee uu ku sugan yahay muddo ka dib waxay ku xiran tahay inta badan awoodda uu u leeyahay inuu kordhiyo wax soo saarkiisa shaqaale kasta.
“Si loola dagaallamo hoos u dhaca dhaqaalaha waxaa lagama maarmaan ah in Fed ay si adag uga jawaabto; qarashka ku baxa qoysaska waa in la kordhiyaa si loo magdhabo maalgashiga ganacsi ee liita. "
Seynisyahannada cimilada ayaa mar dhow arka in cilmi-baaristooda aan la iska indhatirin oo keliya laakiin la silcinaayo.
"Waxa ugu wanaagsan ee aad ka dhihi karto siyaasada dhaqaale ee niyadjabkaan ayaa ah, inta badan, waxaan iska ilaaliney in gebi ahaanba lagu soo celiyo murugada weyn."
"Xaaladaha badankood, laga yaabee dhammaantood, musuqmaasuqu wuu sii xumaanayaa wuuna adag yahay in la aqoonsado."
"Xitaa haddii xadka amaahda la kiciyo si looga hortago deyn degdeg ah, xitaa haddii xiritaanka dowladda si uun loo joojiyo, waxay noqon doontaa oo kaliya dib u dhigis kumeelgaar ah."
"Waxaan aaminsanahay bulsho sinnaan yar, oo ay taageerayaan hay'ado xadidaya darafyada hantida iyo saboolnimada."
Iskusoo wada duuboo, waa inaan joojino iska yeel yeelida aan sameyneyno wadahadal daacad ah oo daacad ah.
"Miyaynu yeelan doonnaa awood aan ku fulino dib-u-habeyn dhab ah oo lagu sameeyo nidaamka maaliyadeed?" Haddii kale, xiisadda taagan ma noqon doonto wax gaar ah, laakiin qaabka ay dhacdooyinka mustaqbalka raaci doonaan. "
"Siyaasiyiinta waxaa lagu abaalmariyaa inay qabtaan xilal gaar ah, tanina waxay ka dhigeysaa inay si adag u difaacaan, oo xitaa ay iska dhaadhiciyaan inaysan dhab ahaan iibsan."
«Waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda, xorriyadda madaniga ah iyo ku dhaqanka sharciga. Taasi waxay iga dhigeysaa mid furfuran waana ku faanayaa. ”
Laakiin tusaalihi Kaliforniya ayaa sii dejinaya. Kumaa u maleyn lahaa in gobolka ugu weyn ee Mareykanka, oo ah dowlad dhaqaalaheeda uu ka balaaran yahay inta badan laakiin dhowr wadan, ay si sahal ah ku noqon karto jamhuuriyad muus ah? "
Dibedda, way adag tahay in la arko farqiga u dhexeeya waxa ay 'runti' rumeysan yihiin iyo waxa lagu siinayo inay aaminaan. "
"Marka dhaqaaluhu si qoto dheer u niyad jabsan yahay, qoysaska iyo gaar ahaan ganacsiyada waxaa laga yaabaa inaysan diyaar u ahayn inay kordhiyaan kharashaadka iyadoo aan loo eegin inta lacag ah ee ay haystaan, waxay si fudud ugu dari karaan wax kasta oo ballaadhin lacageed ah guddigooda agaasimayaasha."
Siyaasaddu waxay go’aamisaa cidda awoodda leh, ee ma ogaanayso cidda runta haysata.
"Fikradda ah in daacadnimada marka xaqiiqda la waajaho ay tahay wanaag waa u muuqataa inay ka baxday nolosha bulshada."
Sheekooyinka dadka ka soo baxaya faqriga iyo taajirnimada aad iyo aad ayey u yar yihiin.
"Sida kaliya ee macno loogu samayn karo waxa dhacay waa in loo arko codbixinta mid muujinaysa, si fiican, siyaasad aqoonsi ah."
"Asalka dhibaatadeena waa mid aan yareyn amarka caalamka, waana la xallin karaa si deg deg ah oo fudud haddii ay jiraan dad ku filan jagooyinka awoodda oo fahmay xaqiiqda."
"Ma jiro qof si buuxda daacad u ah, laakiin badda cad ee beenta aan hadda la xanuunsanno waa wax cusub."
Xaaladda noocan oo kale ah, ee siyaasadda lacagta ay noqotay mid aan waxtar lahayn, ayaa loo aqoonsaday dabin lacageed.
Caymiska aan maanta la cayimin waa dhalinyaro ama qoysas dhalinyaro ah.
«Teknolojiyaddu waa saaxiibkeen. Waxaan leenahay dhaqaalaheena soosaarida oo hooseeya oo aan ku gaari karno qiime aad u jaban. "
"Sidee kalsooni ku qabtaa, markaa, in laguu sheego in wax walba aysan khusayn, in waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato ay tahay fikrado fudud oo fudud!"
Waxaan dhamaanteen u nugul nahay caqiidooyinka inagu habboon.
Xaaladaha siyaasadeed ee qaran ayaa markaa ka adkaanaya adduunka.
Iyagu ma ahan dad, laakiin fikradaha ay si adag u difaacayaan siyaasiyiinta qaarkood iyo dadka ka faalooda arrimaha warbaahinta, inta badan muxaafidka, waxayna leeyihiin hal sifo oo ay wadaagaan: gabi ahaanba waa wax aan sal lahayn.
"Fikradda ah inuu jiro hal shay oo kaliya oo loo yaqaan hanti-wadaagga sax maahan."
Waa kuma Paul Robin Krugman?
Hadda oo aan ognahay weedhaha caanka ah ee Paul Krugman, aan wax yar ka hadalno taariikh nololeedkiisa. Waxay ku saabsan tahay dhaqaaleyahan Mareykan ah oo dhashay 1953 magaalada Albany. Wuxuu ka qaatay BA cilmiga dhaqaalaha jaamacadda Yale iyo Ph.D. cilmiga dhaqaalaha ee MIT (Massachusetts Institute of Technology). Marka laga hadlayo noloshiisa shaqo, Krugman wuxuu macallin ka ahaa dhowr jaamacadood, oo ay ka mid tahay Jaamacadda Princeton. Si kastaba ha noqotee, dhaqaaleyahankan dabaaldega wuxuu u taagan yahay gaar ahaan ku guuleysiga Nobel Prize ee dhaqaalaha sanadkii 2008. Jidadani waxay ka dhigaysaa weedhaha Paul Krugman il wanaagsan oo dhiirigelin iyo barasho leh.
Waa maxay aragtida Paul Krugman?
Kaliya maahan weedhaha Paul Krugman caan, laakiin sidoo kale aragtidiisa ganacsiga. Dhaqan ahaan, Heckscher iyo Ohlin waxay u ololeeyeen ganacsiga ka dhexeeya warshadaha kala duwan, halka Krugman uu soo jeediyay aragti la xiriirta ganacsiga gudaha ka ganacsiga. Taasi waa, sida uu qabo dhaqaaleyahankan waxaa ganacsi caalami ah ka dhexeeyaa wadamada xaaladooda dhaqaale ay lamid tahay isla markaana leh wax soo saar isku nooc ah.
Markii hore waxaa loo maleynayay in ganacsigu inta badan ku tiirsanaa habka loo qeybiyo waxyaabaha kala duwan ee wax soo saar ee waddan kasta leeyahay, taas oo ah: shaqo, dhul iyo raasamaal. Qaabkan waxaa loo fahmay in ganacsiga caalamiga ah ay isweydaarsadaan dalalka koonfurta iyo waqooyiga. Sababtaas awgeed, qof kastaa wuu kasbadaa maadaama waddammada ku takhasusay alaabadaas wax soo saarkoodu ay ka waxtar badan yihiin.
Xigashooyinka Milton Friedman
Si kastaba ha noqotee, Paul Krugman wuxuu sameeyay daraasado dhowr ah oo muujiyay in ganacsiga caalamiga ah ee jira lagu fuliyay alaabooyin isku nooc ah. Maxaa intaa ka badan, isweydaarsiga ayaa ka dhacay kaliya wadamada waqooyiga. Laga bilaabo xilligan waxaa ka yimid waxa loogu yeero "aragtida cusub ee ganacsiga" oo uu soo saaray Paul Krugman. Sida laga soo xigtay isaga, kuwa runtii ka faa'iideysta ganacsiga caalamiga ah ee lala yeesho dhaqaalaha ugu warshadaha badan. Sidaa darteed, dhaqaaleyahankan wuxuu diidayaa fikradda soo jireenka ah ee ah in ganacsiga caalamiga ah uu kordhiyo daryeelka guud.
Sida aan ku arki karno oo keliya kelmadaha Paul Krugman, laakiin sidoo kale aragtidiisa, isagu waa shaqsi aad u dhaleeceeya bulshada iyo caqli dhalaalaya. Waxaan rajaynayaa in maqaalkani kuu ahaa mid waxtar iyo dhiirigalin kuu leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Paul Krugman Xigasho
Caawimaad la yaqaan
Ma u baahan tahay barnaamijka xisaabinta shirkaddaada?